ဆောင်းပါး | Shwe Phee Myay
သတင်းမှား၊ သတင်းတုများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ
Mai Rukaw Fri, 11/06/2020 - 09:46
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ရက် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ သတင်းအမှား၊ သတင်းအတုများသည် လူမှုကွန်ရက်ပေါ် သိသိသာသာ များပြားလာသည်။ သတင်းအမှားကြောင့် မဲဆန္ဒရှင် လူထုများ၏ ရွေးချယ်ခွင့်ကို မှားယွင်းသွားစေနိုင်သည့်အခြေအနေ ကြုံတွေ့လာနိုင်သည်ဟု လူငယ်နှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ပြောဆိုနေကြသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကာလကဲ့သို့ လူစုလူဝေးဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး မလုပ်နိုင်ခြင်းသည် လူအများစုကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်အောင် တွန်းပို့လိုက်သည့်အတွက် သတင်းအမှား၊ သတင်းအတုများသည်လည်း လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။
Read more about သတင်းမှား၊ သတင်းတုများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ
ဇယန်းကြီးကျေးရွာခံ ၂ ဦးကို ပြည်သူ့စစ်နဲ့တပ်မတော်တို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား လွေးနှင်းဖြူ
journalist Sat, 10/31/2020 - 08:54
မနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်က ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နမ့်ဆန်မြို့နယ် ဇယန်းကြီးကျေးရွာနေ အမျိုးသား ၂ ဦးကို ညပိုင်း ၈ နာရီခွဲအချိန်မှာ ငွန်ဆိုင်းပြည်သူ့စစ်နဲ့တပ်မတော်တို့က လာရောက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဇယန်းကြီးကျေးရွာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “ဘာကြောင့်ဖမ်းသလဲဆိုတာ ကျနော်တို့လည်း အသေးစိတ် မသိရသေးပါဘူး။ လာရောက် ဖမ်းတုန်းကတော့ ငွန်ဆိုင်းပြည်သူ့စစ်နဲ့ တပ်မတော်တို့က ဖမ်းသွားတယ်” လို့ ဒီနေ့မှာ ရွှေဖီမြေကို ပြောပါတယ်။
Read more about ဇယန်းကြီးကျေးရွာခံ ၂ ဦးကို ပြည်သူ့စစ်နဲ့တပ်မတော်တို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား လွေးနှင်းဖြူ
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာ မဟုတ်တဲ့ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်က ဘာပြောလဲ…?
admin Sat, 10/24/2020 - 12:26
မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှာ တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဖို့ ဘာကြောင့်အကြံပြုခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အခုလို ပြောဆိုထားပါတယ်။
တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့
Read more about ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာ မဟုတ်တဲ့ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်က ဘာပြောလဲ…?
မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာအုပ်စု ၄ အုပ်စုကို RCSS တပ်ဖွဲ့က အသွားအလာ ထပ်မံပိတ်ပင်
admin Fri, 10/23/2020 - 12:40
အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်၊ မိုင်းကိုင်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းကိုင်မြို့နယ်အတွင်းက ကျေးရွာအုပ်စု ၄ အုပ်စုကို အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်က စတင်ပြီးတော့ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS/SSA)က ဒုတိယအကြိမ် အသွားအလာ ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အသွားအလာ ပိတ်ပင်ထားခံရတဲ့ အုပ်စု ၄ အုပ်စုကတော့ စုံလော၊ ခေးအုံအွေ့၊ ဖာခေါင်နဲ့ နောင်စံဖူးကျေးရွာအုပ်စုတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီအုပ်စု ၄ အုပ်စုထဲမှာ ကျေးရွာစုစုပေါင်း (၂၀)ကျော်ရှိတယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
Read more about မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ထဲက ကျေးရွာအုပ်စု ၄ အုပ်စုကို RCSS တပ်ဖွဲ့က အသွားအလာ ထပ်မံပိတ်ပင်
ဆိုင်းလိန်ကျေးရွာခံတွေ အစိုးရကပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေး ၃ ကြိမ်စာပေါင်းပြီးမှသာ ရရှိ
admin Wed, 10/21/2020 - 13:00
အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်၊ မိုးကုတ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိုးကုတ်မြို့နယ် ပိန်းပြစ်ကျေးရွာအုပ်စု ဆိုင်းလိန်ကျေးရွာမှာ ကိုဗစ်ရောဂါကာလအတွင်း အစိုးရကပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးတွေကို ၃ သုတ်စာပေါင်းပြီးတော့ မနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်က ကျေးရွာခံတွေဆီ ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Read more about ဆိုင်းလိန်ကျေးရွာခံတွေ အစိုးရကပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေး ၃ ကြိမ်စာပေါင်းပြီးမှသာ ရရှိ
ဝေဖန်မှုပေါင်းများစွာနှင့် ရှမ်းပြည်ရွေးကောက်ပွဲ လားရာ
admin Tue, 10/20/2020 - 13:14
ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သည့် မြို့နယ် ၇ မြို့နယ်ရှိခဲ့ပြီး ယခုလာမည့် ၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းကိုင်မြို့ ထပ်တိုးလာ၍ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သည့် မြို့နယ်ပေါင်း ၆ ခု ရှိလာသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းလားနှင့် ‘ဝ’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းထဲတွင် ပါဝင်သည့် ပန်ဆန်း၊ နားဖန်း၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဝိုင်မြို့နယ်တို့သည် ယခင်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ကျင်းပခွင့်မရှိသည့် မြို့နယ်များဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက် အထူးအဆန်း မဟုတ်ပေ။
Read more about ဝေဖန်မှုပေါင်းများစွာနှင့် ရှမ်းပြည်ရွေးကောက်ပွဲ လားရာ
Subscribe to ဆောင်းပါး